SEO-ga maxaliga ah: Waa maxay xigasho? Dhisida xigasho? | Martech Zone
SEO-ga maxaliga ah: Waa maxay xigasho? Dhisida xigasho?
Raadinta maxalliga ahi waa halbowlaha gebi ahaanba urur kasta oo u adeega gobol maxalli ah. Dhib malahan hadii ay tahay xuquuqo qaran oo ku leh magaalooyin kala duwan, qandaraasle saqaf, ama meelaha wax laga cuno ee xaafadaada search raadinta ganacsi qadka ah waxay muujineysaa ujeedo aan caadi aheyn in iibsigu soo socdo.
In muddo ah, fure u ah in la muujiyo gobol ahaan waxay ahayd in la helo bogag si fiican u horumarsan oo la hadlay magaalooyin gaar ah, lambarrada boostada, degmooyin, ama astaamo kale oo goboleed oo aqoonsan kara ganacsigaaga inuu yahay mid maxalli ah. Furaha qiimeynta gobol ahaan waxay ahayd in la hubiyo in liisaska ganacsiga ay ku qoran yihiin si dadka gurguurta ee Google ay u xaqiijiyaan gobolkaaga si sax ah.
Markii raadinta maxalliga ah ay isbeddelaysay, Google waxay billowday Google My Business taasina waxay awood u siisay ganacsiyada inay si aad u wanaagsan u kantaroolaan natiijooyinkooda raadinta juqraafi iyadoo loo marayo bogga natiijada mashiinka raadinta "khariidadda khariidadda". Ku lifaaqan waxqabadka iyo dib u eegista weyn, shirkaddaadu waxay cirka isku shareeraysaa xagga sare ee tartamayaasheeda iyadoo la ilaalinayo joogitaanka deegaanka ee firfircoon.
Laakiin haysashada diiwaanka, koontada Google My Business, iyo uruurinta dib u eegista ma aha furayaasha kaliya ee raadinta maxalliga ah. Google wuxuu aad ugu xeel-dheer yahay dhismaha algorithms-ka kaas oo aqoonsan kara sheegashada shirkad khadka tooska ah iyada oo aan lahayn backlink. Kuwaas oo loo yaqaan xaashiyo.
Waa maxay xigasho?
Tixraac waa xusid dijitaal ah oo lagu garto astaamo u gaar ah meheraddaada khadka tooska ah. Waxaa ku jiri kara magac sumadeed ama xariiq alaab, cinwaan jireed, ama lambar taleefan. Ma ahan xiriiriye.
In kasta oo la taliyayaal badan oo raadinta ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen dib u eegisyo iyo gadaal isku xirnaansho, shirkaddaada deegaanka ayaa sidoo kale kobcin karta muuqaalka raadinta maxalliga ah iyada oo la adeegsanayo xigashooyin.
Waa maxay Dhisid Tixraac?
Dhismaha xigashooyinka waa istiraatiijiyad lagu hubinayo in magacaaga lagu xuso khadka tooska ah iyada oo la adeegsanayo degello internet oo kale oo leh xigashooyin isdaba joog ah. Marka makiinadaha raadinta si isdaba joog ah ay dhawaanahan u arkaan tixraac khadka tooska ah oo u gaar ah meheraddaada, waxay ka dhigan tahay ganacsigaagu inuu yahay mid lagu kalsoonaan karo waxayna sii wadi doonaan inay kugu qiimeeyaan raadinta maxalliga ah ee internetka laga wado.
Dhismaha Tixraac ayaa ka muhiimsan sidii hore maxaa yeelay waxay dhiseysaa deggenaasho deg deg ah oo khadka tooska ah ah oo degellada ah. Adduunyada kalabar dhammaan raadinta Google ay leeyihiin tixraac maxalli ah, tani waa istaraatiijiyad muhiim ah.
Cod Baadhis iyo xigashooyin
Kobcinta codka raadinta, helitaanka xigashooyin isdaba-joog ah oo sax ah ayaa sii noqonaya kuwo aad u muhiim ah. Raadinta codku kuma siineyso fursad aad ku hesho booqde mooyee haddii meheraddaadu aysan jawaab u ahayn oo xogta aad siineyso matoorada raadinta ay sax tahay.
In ka badan 1tii qofba 5 ayaa adeegsanaya cod raadinta iyo 48% dadka isticmaala cod raadinta ayaa raadiyay macluumaadka ganacsiga maxalliga ah.
Uberall waa madal awood u siineysa waqtiga-dhabta ah maareynta xogta goobta meherada dhammaan meheradaha raadinta, nidaamyada khariidaynta, iyo kanaalada warbaahinta ee wada iibka. Uberall waxay u suurta galisaa ganacsiyada inay maareeyaan ganacsigooda 'joogitaanka khadka tooska ah ee internetka, sumcadda iyo isdhaxgalka macaamiisha waqtiga dhabta ah hal madal oo ay ugu yeeraan daruuraha suuq geynta goobta.
Dalbo Demo Uberall ah
Uberall ayaa sidoo kale bilaabay Uberall Muhiim, oo ah nooc bilaash ah oo ka mid ah barnaamijkeeda loogu talagalay in lagu taageero ganacsiyada daryeelka caafimaadka, dukaamada iyo makhaayadaha inta lagu jiro aafada. Waxay u adeegsan karaan Uberall Muhiim si ay ugu cusboonaysiiyaan liisaskooda si bilaash ah dhammaan Google, Apple, Facebook, Bing, Yelp iyo inbadan.
Waxay daabaceen xogtan, Dhisid xigasho, Taasi waxay bixinaysaa aragti guud oo ku saabsan xigashooyinka, dhismaha xigashada, iyo faa'iidooyinka istiraatiijiyadda.
Tags: google ganacsigeygainfographicliiskalambarka taleefankawaa maxay xigasho
Dib-u-fikirka B2B Suuqgeynta Gaaritaanka? Waa tan Sida Loogu Xullo Ololaha Guusha